पदम घले, Author at Mardi News - Page4of6Mardi News
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बम ब्लाष्ट गर्दा भूकम्पको महशुस
पोखरा, ५ वैशाख । पोखरा महानगरपालिका– १४ हवेलिमार्गस्थित क्षेत्रमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा क्रममा बम पडकाउँदा त्यहाँका स्थानीयले भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । पटक पटक बम पडकाउँदा थर्किन गई त्यहाँका घरहरू चर्किने होकि भन्ने डर तारबार छेउका घर भएका स्थानीयले बताएको छ । तारबार छेउका बासिन्दाहरूले स्काभेटर, डोजर जस्ता साधन प्रयोग गर्न सुझाव दिँदा पनि विमानस्थल निर्माण आयोजनाकर्ताले वेवास्ता गरेको हवेली टोल निवासि भूवन गुरूङले मर्दी न्यूजलाई बताए । टोलवासीहरूले सुझाव दिने क्रममा डेलिगेशन पटक पटक जाँदा एयरपोर्ट… पुरा पढौ
लकडाउनमा कलाकार देवेन गुरूङ
पोखरा । विश्व महामारीको रूपमा फैलिदै गएको कोरोनाभाईरसको कारण विश्व नै अहिले लकडाउनको स्थितिमा छ । यसको प्रभावले मासिहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छ । घर भित्र के गरेर बस्ने, दिन काट्न सबैलाई गाह्रै नै हुन्छ । तर त्यसै बसिराख्ने कुरो पनि आएन । विशेष त कलाकारहरू आआफनै धुनमा मस्त हुन्छ । जाँगर चल्दा उनीहरू भोग प्यास घाम पानी केही नभनी आफनो सिर्जनामा तल्लिन हुन्छन । अझै भन्नु पर्दा यूवा पिंढीका कलाकारहरू झनै जोसिला हुन्छ । कोरोनो भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका… पुरा पढौ
समुन्नत नेपाल समूह र सामुदायिक विद्यालय
देशमा विद्यमान शैक्षिक असमानता कम गर्ने उद्देश्यले वि.सं २०६६ सालमा “समान शिक्षाको समान दायित्य“ भन्ने मुल नाराको साथ पोखराका जुझारु युवाहरूको समूहले समुन्नत नेपाल समूह गठन गरेको थियो । निरज कायस्थको अध्यक्षतामा पन्ध्र सदस्यीय कार्यसमिति रहेको उक्त संस्थाले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारको साथै आम विद्यार्थीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तथा आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदिको सुक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गरी ती पक्षहरुको न्यूनीकरण गर्दै एउटा सक्षम र सबल विद्यार्थी तयार गर्ने उद्देश्यका साथ संस्था स्थापना गरिएको थियो । त्यसबेला संस्थाले पहिलो… पुरा पढौ
पोखरा महानगरका वडा नं. १६ ले मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई राहात उपलब्ध
पोखरा, १८ चैत । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले ११ गतेदेखि गरेको देशव्यापी लकडाउनका कारण अति विपन्न र ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई मर्कामा परेका छन् । मर्कामा परेका उक्त मजदुरहरुको लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ ले राहत १३ घरपरिवारका सदस्यलाई वितरण गरेको छ । वडा नं. १६ का अध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्यले १६ नम्बर वडामा अवस्थित बानियाँ खाद्य स्टोर्सबाट खाद्य सामान बिक्री वितरण गरी सहयोग गर्न पत्रचार गर्दै उक्त राहत वितरण गरेको हो । राहत वितरणमा ६… पुरा पढौ
पोखरा, १६ चैत । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिदै गएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण १ सय ९० भन्दा धेरै देशलाई ग्रस्त बनाउदै लगेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले मङ्गलबारदेखि लकडाउन गर्दा रोजीरोटी गुमेका विपन्न परिवारलाई समस्या पारेको छ । उनीहरुमा दैनिक खाद्यन्नको समस्या देखिएको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरको लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ ले निःशुल्क खाद्यन्न वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । यही अभियानलाई सहयोग गर्दै सूर्योदय बोर्डिङ स्कुलका प्राचार्य रूपबहादुर गुरूङबाट नगद… पुरा पढौ